Kaddib Goolkii Cajiibka Ahaa Ee Watford, SADDEXDA Kooxood Oo Mohamed Salah Uu Wareegi Karayo Oo La Magacaabay - GOOL24.NET
Kaddib Goolkii Cajiibka Ahaa Ee Watford, SADDEXDA Kooxood Oo Mohamed Salah Uu Wareegi Karayo Oo La Magacaabay
Kaddib wacdarihii uu Mohamed Salah ka sameeyey ciyaartii Watford ee Sabtida oo uu gool qurux badan dhaliyey mid kalena caawiyey, waxa wali taagan hadal-haynta mustaqbalka ee laacibkan taas oo u muuqata in aanay istaagi doonin illaa inta ay Liverpool heshiis cusub ka saxeexayso.
Xiddiga reer Masar waxa uu xilli icyaareedkan dhaliyey 10 gool oo dhamaan tartamada ah, waxaana goolkii quruxda badnaa ee uu ka dhaliyey Man City uu kusii darsaday mid kale oo cajiib ah oo uu Watford difaaceeda goysmo ku dilay ka hor intii aanu shabaqooda gaadhin.
Jurgen Klopp iyo Jamie Carragher ayaa ciyaarta kaddib amaan badan kula dul-dhacay, kuna tilmaamay ciyaartoyga ugu wanaagsan kubadda cagta waqtigan, hase yeeshee waxa isaguna bedka keenay dood kale, halyeyga Manchester United ee Gary Neville oo rumaysan in
Neville waxa uu sheegay inay jiraan saddex kooxood oo waaweyn oo qaaradda Yurub ah oo bartilmaameedsada ciyaaryahannada ugu wanaagsan, soona jiita, kuwaas oo Mohamed Salah uu hadda ku jiro diiraddooda.
Mohamed Salah oo heshiiskiisa Liverpool uu soconayo illaa sannadka 2023, waxay hadda kooxdiisu doonaysaa inuu qandaraas cusub u saxeexo haddii kalena waxay lumin karaan dhamaadka xilli ciyaareedkan oo ay ku qasbanaanayaan inay iibiyaan, si ay uga fogaadaan qaladkii Wijnaldum oo kale oo si xor ah uga tegay.
Gary Neville ayaa yidhi: “Ilama aha in Mohamed Salah uu sii joogi doono Liverpool inta ka hadhay waayihiisa ciyaareed oo dhan.
“Waa aragtidayda shaqsiga ah, mar walbana waan qabay aragtidaas, wayse qaldanaan kartaa.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray: “Premier League wuu diciifi doonaa haddii uu ka tago Salah. Kaliya waxa aan ka fikirayaa qof sida Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kylian Mbappe ah, laakiin lacag kama hadlayo.
“Waxay ila tahay in Salah uu tago Real Madrid oo uu kasoo ciyaaro Bernabeu – Real Madrid way kusoo laabanaysaa [doonistiisa].”